Ubuntu 17.10 inotakura Kernel 4.13 | Linux Vakapindwa muropa
Ubuntu 17.10 inotakura Kernel 4.13
Kunyangwe pachine nguva yakareba yekuti ramangwana Ubuntu 17.10 ribude, ruzivo rwuri kutanga kuzivikanwa nezve ramangwana uye nyowani nyowani yeCanonical inoshanda sisitimu. Mune ino kesi, zvakaziviswa kuti ichauya neKernel 4.13 yakaiswa, iyo Kernel iyo isipo izvozvi, asi izvo zvichave zvakawandisa kupfuura kugadzirira nenguva iyoyo.
Chinhu chinonakidza ndechekuti haasati aburitswa zviri pamutemo Kwete kunyange iyo kernel 4.12, iyo iri kuenda kune yayo yazvino RC shanduro, asi iyo ine angangoita akati wandei mavhiki akasara kuti igadzikane. Kubva pakuonekwa kwayo, Canonical ikambani inoda kuronga kwenguva refu-refu.
Izvi zvinodaro nekuti Ubuntu 17.10 ichaunza shanduko dzinotyisa. Iyi inoshanda sisitimu inounza Gnome kudzoka sedesktop yakasarudzika, mushure mekundikana kweUnited desktop, uye ichaunza zvimwe zvinhu zvitsva sekubatanidzwa neWayland.
Panguva ino, kwete zvimwe zvakawanda zvinozivikanwa nezve system, sezvo panguva ino kunyangwe iyo alpha vhezheni haina kubuda. Chinhu chega chiri kubuda ndezveDaily Kuvaka kunozivikanwa, mune nhepfenyuro diki inowedzerwa zuva rega rega kune ino inoshanda system, iyo ichiri "larva." Parizvino, iyo inoshanda sisitimu ichine Kernel 4.11, asi ichavandudzwa kuita 4.12 painoburitswa nenzira yakagadzikana.
Tinogona kunakidzwa neAlfa yekutanga musi wa29 wemwedzi uno, asi paizove nemwedzi mina yekusimudzira yeiyo shanduro yakagadzikana. Semazuva ese muUbuntu anoshanda masystem, ichaburitswa mumwedzi waGumiguru, ichanzi Artful Aardvark uye ichave nerutsigiro rwemwedzi mipfumbamwe, ndiko kuti, kusvika Chikunguru 4, sezvo isiri iyo LTS vhezheni.
Pasina kupokana, iyi inoshanda system zvipikirwa kunyangwe iyo nguva ichiripo. Kwechinguva, isu tichafanirwa kugadzirisa vhezheni yayo yapfuura, Ubuntu 17.04.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Ubuntu 17.10 inotakura Kernel 4.13